Mgbe mberede patch, ụdị ọhụrụ nke Wireshark 3.2.0 bịarutere na mgbanwe ndị a | Site na Linux
Mgbe nsogbu mberede, ụdị Wireshark 3.2.0 ọhụrụ na-abịa na mgbanwe ndị a
Izu gara aga anyị na-eso ebe a na blog akụkọ banyere ụdị mmezi nke Wireshark 3.0.7, nke bụ ihe mberede version na-gbapụ iji patch oké egwu chinchi na ngwa. Ugbu a obere oge Ndị mmepe Wireshark mara ọkwa na mwepụta nke ụdị ọhụụ nke n'egosi mmalite nke alaka ụlọ ọrụ ọhụrụ kwụsiri ike, nke a bụ ụdị ahụ Wireshark 3.2.0.
Maka ndị na-amaghị Wireshark, ị kwesịrị ịma nke ahụ bụ free network protocol analyzer, Kedu ihe ọ bụ eji maka nyocha na ntanetị na ntanetị, mmemme a na - enyere anyị aka ịhụ ihe na - eme na ntanetị na bụ de facto ọkọlọtọ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ azụmahịa na ndị na-abụghị ndị ọrụ ha, ụlọ ọrụ gọọmentị na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ. Ngwa a na-agba ọsọ n'ọtụtụ sistemụ Unix na arụ ọrụs, gụnyere Linux, Microsoft Windows, Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Android na Mac OS X.
1 Wireshark 3.2.0 Igodo Ọhụrụ
2 Etu esi etinye Wireshark 3.2.0 na Linux?
Wireshark 3.2.0 Igodo Ọhụrụ
Na ụdị ọhụrụ nke Wireshark 3.2.0, gbakwunyere ikike iji chepụta na dọrọ na dobe mode dọrọ na idobe ubi na nkụnye eji isi mee ka imepụta kọlụm maka mpaghara a ma ọ bụ na mpaghara ntinye ntinye ngosi iji mepụta ihe ọhụrụ.
Iji mepụta ihe nzacha ọhụrụ maka ihe nwere kọlụm, enwere ike ịdọrọ mmewere ugbu a na mpaghara nzacha ngosi.
para HTTP / 2, a na-akwado idozigharị ngwugwu iyi, gbakwunyere na Nkwado maka iwepu oge HTTP / HTTP2 iji Brotli mkpakọ algọridim.
Na mkparịta ụka "ejiri rụọ ọrụ", ị nwere ike ịkwalite, gbanyụọ, na ntụgharị usoro dabere na nchịkọta ahọrọ ahọrọ. A pụkwara ikpebi ụdị usoro ahụ dabere na uru nza.
Usoro ihe owuwu na-emejuputa nkwenye nke nrụnye ụlọ akwụkwọ SpeexDSP na sistemụ (ọ bụrụ na ọbá akwụkwọ a na-efu efu, etinyere arụmọrụ nke Speex codec processor)
A preview nke kwekọrọ ekwekọ nzacha na-nyere na menu na ndepụta nke nchịkọta na ihe ọmụma zuru ezu adade ke omume “Nyochaa› Tinye dị ka Iyo ”na“ Nyochaa ›Kwadebe nzacha”.
Anyị nwekwara ike ịchọta nke ahụ agbakwunyere nkwado maka ibubata profaịlụ site na faịlụ zipụ ma ọ bụ site na ndekọ ndekọ ndị dị na FS, Tụkwasị na nke a, enwere ike ịmegharị tunnels WireGuard site na iji igodo agbakwunyere na pcapng dump, na mgbakwunye na ntọala ntọala ndekọ dị ugbu a.
Gbakwunyere ime ihe iji nweta nzere sitere na faịlụ nwere okporo ụzọ ejidere, akpọrọ site na nhọrọ "-z nzere" na tshark ma ọ bụ site na menu "Ngwaọrụ> Nzere" na Wireshark.
Nke mgbanwe ndị ọzọ na anyị nwere ike ịchọta na ụdị ọhụụ a:
Editcap na-agbakwụnye nkwado maka nkwụsị nke faịlụ dabere na ụkpụrụ nkeji nkeji;
Maka MacOS gbakwunyere nkwado maka isiokwu gbara ọchịchịrị. Ọchịchịrị isiokwu nkwado maka nyiwe ndị ọzọ ka mma.
Protobuf faịlụ (* .proto) nwere ike ịhazi ugbu a iji mee ka data Protobuf dị na ya, dị ka gRPC.
Agbakwunyere ikike ịkọwa ozi site na usoro gRPC site na iji ọrụ HTTP2 iyi nlọghachị.
Etu esi etinye Wireshark 3.2.0 na Linux?
Maka ndị nwere mmasị ịwụnye ụdị ọhụụ a, Ọ bụrụ na ha bụ ndị ọrụ Ubuntu ma ọ bụ ụfọdụ sitere na ya, Ha nwere ike ịgbakwunye ụlọ ọrụ gọọmentị nke ngwa ahụ, enwere ike ịgbakwunye ya site na ịmepe ọnụ na Ctrl + Alt T na imezu ya:
Emechaa wụnye ngwa ahụ pịnye ihe ndị a na ọdụ:
Ọ dị mkpa ikwu nke ahụ N'oge usoro nwụnye enwere usoro nke ị ga-agbaso na itinye nkewapụ nke ihe ùgwù, na-ekwe ka Wireshark GUI na-agba ọsọ dị ka onye ọrụ nkịtị mgbe nkwụsị (nke na-anakọta ngwugwu site na ihu ya) na-agba ọsọ na ikike dị elu achọrọ maka nsuso.
Ọ bụrụ na ị zara azịza na-adịghị mma ma chọọ ịgbanwe nke a. Iji mezuo nke a, na ọnụ anyị ga-pịnye iwu na-esonụ:
N'ebe a, anyị ga-ahọrọ ee mgbe a jụrụ anyị ma ọ bụrụ na ndị na-abụghị ndị isi ga-enwe ike ijide ngwugwu.
Ugbu a maka ndị bụ ndị ọrụ Arch Linux ma ọ bụ ụfọdụ sitere na ya, anyị nwere ike iwunye ngwa ahụ site na ịme iwu ndị a na njedebe:
Mgbe maka Fedora na nkwekọrịta, pịa ụdị iwu a:
Ma anyị guzosie ikikere na ndị na-esonụ iwu, ebe anyị dochie "onye ọrụ" na aha njirimara ị nwere na gị usoro
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Mgbe nsogbu mberede, ụdị Wireshark 3.2.0 ọhụrụ na-abịa na mgbanwe ndị a
The grinch ọgụ Visual Studio Code ma na-ezu ohi Christmas
Ihe ohuru nke Darktable 3.0, biara na imeghari ohuru na ihe ndi ozo